Okwangoku, iikhrayitheriya eziphambili ezibandakanya i-GB 2626-2006 malunga nemaski yezixhobo zokuzikhusela zokuphefumla zokuthintela ukuzikhusela kuthintela uhlobo lokucoca ulwelo ", GB 19083-2010" iimfuno zobugcisa zokuphefumla ", YY, 0469-2004" zonyango lobugcisa kufuneka " , I-GB / T 32610-2016 "inkcazo yobugcisa bemaski yokhuselo yemihla ngemihla, njl., Ukugubungela ukhuselo lwabasebenzi, ukhuseleko kwezonyango, kunye nokhuseleko.
I-GB 2626-2006 "isixhobo sokuzikhusela sokuphefumla sokuthintela ukungcola umzimba-okwenziwa kukuphefumla" okwenziwa yi-aqsiq yangaphambili, ulawulo lwase-China lwazisa, njengombhalo opheleleyo womgangatho ogunyazisiweyo, owaphunyezwa nge-1 kaDisemba ngo-2006. kwimigangatho ibandakanya zonke iintlobo zamasuntswana, kubandakanya uthuli, umsi, inkungu kunye nezinto ezincinci, ikwacacisa imigangatho yemveliso kunye netekhnoloji yezixhobo zokhuseleko lokuphefumla, izixhobo, ulwakhiwo, amanqaku omaski wothuli, ukusebenza, ukusebenza ngokufayilisha (uthuli) , ukuxhathisa ukuphefumla, iindlela zokuchonga, uchonga imveliso, ukupakisha njalo njalo zinezimfuneko ezingqongqo.
Iimfuneko zobuchwephesha zokuphefumla zonyango zabhengezwa yi-iqsiq kunye nolawulo lokubekwa emgangathweni kwaye zaphunyezwa nge-1 ka-Agasti ka-2011. Lo mgangatho ubeka iimfuno zobugcisa, iindlela zovavanyo, amanqaku kunye nemiyalelo yokusetyenziswa, ukupakisha, ukuhambisa kunye nokugcina abagqibeleli bezonyango. Ilungele ukuzigquma kunye nokuphefumla okuphefumlayo okucoca izinto ezingena emoyeni kunye neebhloksi ezinamachaphaza, igazi, ulwelo lomzimba kunye nobukho bemeko yokusebenza kwezonyango. I-4.10 yemigangatho iyacetyiswa kwaye enye esele iyinyanzelekile.